MOUNTDOG Update 7.8inch-6.5ft-200cm Photography Tripod Light Stand ~ ICT.com.mm
HomeMOUNTDOG Update 7.8inch-6.5ft-200cm Photography Tripod Light Stand
MOUNTDOG Update 7.8inch-6.5ft-200cm Photography Tripod Light Stand
Folded Height: 2.36 ft / 28.3″ / 72cm Maximum Height: 6.ft / 78″ /200cm Max. Load Capacity: lbs/2.kg Spigot: / (need adapter to convert to 3/8) Tube Diameter: inch/2mm Segments:3ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရာမှာအသုံးပြုတဲ့... [Learn more]
Brand: MOUNTDOGFilter by: Tripods
Folded Height: 2.36 ft / 28.3″ / 72cm
Maximum Height: 6.ft / 78″ /200cm
Max. Load Capacity: lbs/2.kg
Spigot: / (need adapter to convert to 3/8)
Tube Diameter: inch/2mm
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရာမှာအသုံးပြုတဲ့ Reflector, Softbox နှင့် Umbrella photography lighting kit တို့ကို တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ MOUNTDOG အမှတ်တံဆိပ် သုံးချောင်းထောက် Light Stand ဖြစ်ပါတယ်။ အရှည်ဆုံး အမြင့် 78 လက်မ/ 6.5 ပေ/ 200cm အထိရရှိမှာဖြစ်ပြီး ခေါက်ထားနိုင်တဲ့အမြင့်ကတော့ 28.3 လက်မ/ 2.36 ပေ/ 72 cm ဖြစ်ပါတယ်။ အချင်း ၁” ရှိ ပြွန်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် လှုပ်ယမ်းမှုမဖြစ်စေဘဲ ပိုမို တည်ငြိမ်မှုရှိစေပါတယ်။ အလူမီနီယမ်အလွိုင်းသတ္တုအသုံးပြုတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အခြား သုံးချောင်းထောက် Stand တွေထက်ပိုမိုတောင့်တင်းမှုရှိပြီး တည်ငြိမ်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။
MOUNTDOG 78INCH/6.5FT/200CM Light Stand
MOUNTDOG light stand for reflector, softbox, umbrella photography lighting kit is 78inch/6.5ft/200cm high,1 inch diameter tube. More stable and not shake. Aluminum alloy made material. More stable than others.